Ọkụ mpaghara-mpaghara-Conssin Lighting Co., Ltd.
Ọha ebe ọkụ LED
Ọkụ oriọna LED meziwanye nchekwa site na iji ihe eji eme ya iji mee ka ìhè dịrị ebe ọha gbara ọchịchịrị, ụzọ ụkwụ, ụzọ ọpụpụ na ebe mbata.
Ngwaahịa e wuru iji lanarị gburugburu ndị a na -agaghị anabata.
A na -emepụta ọkụ ọkụ ihe owuwu ụlọ nke Conssin Lighting ma hazie ka ejiri ya mee ihe maka ụdị mgbanwe ọ bụla, ebe ọ na -enye nnukwu ego n'iji ike.
Ezubere ọkụ ọkụ LED anyị ịkpụpụta na ịkọwapụta ụkpụrụ ụlọ na atụmatụ maka ngwa dị iche iche. A na -ejikarị ha emepụta ihe ndepụta ụlọ ma ọ bụ mepụta isi ihe dị iche iche ahọpụtara. Oghere ọkụ anyị na -enwu ọkụ na -abịa n'ụdị na agba dị iche iche, na -enye ohere iji nkwuwa okwu na ụda olu kee ihe.
Ezubere maka nrụnye ọhụrụ na ịlaghachi azụ maka ụdị ihe eji eme isi HID cobra, ụlọ anyị nwere alloy dị elu nwere mkpuchi ntụ ntụ na-enye arụmọrụ dị elu na ogologo ndụ na gburugburu ebe ọ bụla.
Mụtakwuo maka MPG1
Mụtakwuo maka MPG2
Mụtakwuo maka SMS1
Eserese ọkụ ọkụ Conssin LED maka ọkụ mpaghara dị mma maka ịmepụta nnukwu mkpuchi mkpuchi maka ebe a na -adọba ụgbọala, ụzọ ụkwụ, ndị na -ere ụgbọ ala, ụlọ egwuregwu na ebe egwuregwu.
Ọkụ mpaghara ọkụ sitere na 30 watts ruo 1000watts nwere nkesa ọkụ dị iche iche. Igwe ọkụ mpaghara anyị niile nke LED nwere akwụkwọ ikike afọ 5.
Ìhè Mpaghara LED Conssin na-enye arụmọrụ ike na-eduga klaasị, arụmọrụ yana ntụkwasị obi maka ịrụ ọrụ dị elu n'ọtụtụ ngwa na gburugburu ebe a na-achọsi ike.
Ewubere nke ọma ka ọ dabara na ngwa ọkụ mpaghara, usoro MPG1 anyị na MPG2 na-enye ọkụ na-akwụghị ụgwọ nke ị nwere ike ịtụkwasị anya na idoanya na-enweghị atụ maka oke nchekwa na nchekwa.
Ọkụ n'okporo ụzọ LED.
Mee 13, 2014
Ọkụ ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ
Conssin Lightning ọkụ ọkụ LED kacha ọhụrụ n'ahịa bụ usoro mmezi okporo ụzọ pụrụ iche na arịrịọ gọọmentị ime obodo na Australia.
Ogwe ọkụ ọkụ SMS SMS na -etinye ọkọlọtọ ọhụrụ ejiri maka na USA na Australia maka ọkụ ọha. Usoro nrụpụta na -etolite imewe 20 Watts maka ọkụ ọha na -aga n'okporo ụzọ na okporo ụzọ gaa na 120 Watts imewe maka okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ ala abụọ.
Anyị na -eji teknụzụ ọhụụ Cree LED isi iyi nwere ọmarịcha 135L/W, onye ọkwọ ụgbọ ala Phillips nwere ikike enweghị ike na njikwa mmetụ obodo. Ọdịdị shei pụrụ iche nke nwere aluminom nkedo na -enye ohere idobe ogologo oge na -akwụghị ụgwọ.
Ọdịdị ụlọ - ọkụ n'okporo ámá
Ezubere ya na mpaghara ọha na nke kachasị, LED n'okporo ụzọ na sistemụ ọkụ mpaghara na -enye arụmọrụ dị egwu na -enweghị ịchụ ngwa ngwa.
Mere si elu àgwà aluminum. | Ogige eji arụ ọrụ nke ọma. | Ọnụ ego mmezi dị ala. | Ọrụ siri ike, siri ike ma wuo ya iguzogide 5G.
Ọrụ na nkwado ndị nrụpụta zuru oke.
Anyị na-akwado nhọrọ ọrụ gọọmentị na ala nke steeti dị ka: okporo ụzọ, okporo ụzọ, àkwà mmiri, ogige ụgbọ ala ndị ọzọ.
Sistemụ ọkụ ọkụ mpaghara mpaghara ị nwere ike ịtụkwasị obi.
Ọkụ na -enwu ọkụ, Nnukwu ọkụ ọkụ Bay Bay, Mere Solar Abù Ìhè, Nnukwu ọkụ na -edu ọkụ, Mkpuchi Ụlọikpe Egwuregwu N'èzí, Ikanam Scene Light,